Itafile I-Grid yitafile eyilelwe yinkqubo yegridi eyayiphefumlelwe ngokwakhiwa kwesiko lamaTshayina, apho uhlobo lwesakhiwo somthi esibizwa ngokuba yiDougong (Dou Gong) sisetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo zesakhiwo. Ngokusetyenziswa kobume bemithi obungenelelekayo bemithi, indibano yetafile ikwayinkqubo yokufunda malunga nolwakhiwo kunye nembali. Isakhiwo esixhasayo (iDou Gong) senziwe ngamacandelo emodyuli anokuthi ahlukaniswe ngokulula efuna ukugcinwa.
Uthotho Lwefanitshala I-Sama luthotho lwefenitshala eyinyani ebonelela ngokusebenza, amava neemvakalelo kunye nokungaqhelekanga ngeendlela zayo ezincinci, ezisebenzayo kunye nokubonakalayo okuqinisekileyo. Inkuthazo yenkcubeko ethathwe kwimibongo yeempahla ezinxitywayo ezinxitywe kwimisitho yamaSama iphinda itolikwe kuyilo lwayo ngokudlala umdlalo weconic geometry kunye neendlela zokugoba zentsimbi. Ukuma oqingqiweyo komdyarho kudityaniswa nokulula kwizinto, iifom kunye neendlela zokuvelisa, ukubonelela ngokusebenza & amp; iinzuzo zobuhle. Iziphumo ziloluhlu lwefenitshala yanamhlanje ebonelela ngendawo eyahlukileyo kwiindawo zokuhlala.
Ukulandela Ukugxila Kwintengiso
Ukulandela Ukugxila Kwintengiso I-ND LensGear ngokuchanekileyo ihlengahlengisa iziqu zakho kwiilensi ezinobubanzi obahlukeneyo. I-ND LensGear Series igubungela zonke iilensi ngaphandle kwayo nayiphi na enye iLensGear ekhoyo. Akukho Ukusika kwaye akukho ukugoba: Akusekho kuqhuba isikripthi, amabhanti agugileyo okanye intsalela ecaphukisayo yemitya ebotshiwe. Yonke into ilingana nomtsalane. Kwaye enye yokudibanisa, ayinasixhobo sayo! Ngombulelo kuyilo lobukrelekrele elizikalayo ngobunono nangokuqinileyo ngokujikeleza ilensi.
Inkqubo Yeadaptha Yokufota Ngobungcali
Inkqubo Yeadaptha Yokufota Ngobungcali Inkqubo yeNiceDice yindlela yokuqala yeadaptha esebenzayo kwimveliso yekhamera. Kwenza ukuba kube mnandi ukuncamathisela izixhobo ezinemigangatho eyahlukeneyo yokunyuka okuvela kwiiBrand ezahlukeneyo-ezinje ngezibane, iimonitha, imakrofoni kunye nezihambisi-zekhamera ngendlela eyiyo efunekayo ukuze zibekho kwimeko leyo. Nokuba imigangatho emitsha ekhulayo yokunyuka okanye izixhobo ezisandula ukuthengwa zinokudityaniswa ngokulula kwiNkqubo ye-ND, ngokufumana nje iAdaptha entsha.
Izixhobo Zeekhitshi Sebenzisa iindlela ezahlukileyo zezixhobo zasekhitshini kudala imeko yokungapheki ngokungafunekiyo ukongeza ukubonwa okucaphukisayo. Ukuyibeka kancinci, ndiye ndazama ukwenza isethi emanyeneyo yezi zixhobo zasekhitshini ezidumileyo ezisetyenziswa kuzo zonke izindlu.Uyilo lwaluphefumlelwe ngokufanelekileyo. "IFomu yeZizwe eziManyeneyo" kunye "nembonakalo entle" zimbini kwiimpawu zayo.Ngaphezulu, iya kwamkelwa kwintengiso ngenxa yokubonakala kwayo. Eli iya kuba lithuba lomenzi kunye nomthengi ukuba izinto ezi-6 zithengiwe kwiphakheji enye.
Mangata Patisserie Isazisi Esibonakalayo Esibhakiweyo Thursday 2 December
The Curtain Iofisi Yokuthengisa Wednesday 1 December
Stocker Isitulo Tuesday 30 November
Yila udliwanondlebe losuku Thursday 2 December
Yila intsomi yosuku Wednesday 1 December
Uyilo losuku Tuesday 30 November
Umyili wosuku Monday 29 November
Iqela loyilo losuku Sunday 28 November
Itafile Uthotho Lwefanitshala Smart Ekhitshini Lokusila Ukulandela Ukugxila Kwintengiso Inkqubo Yeadaptha Yokufota Ngobungcali Izixhobo Zeekhitshi